Chernobyl: Taratasy Tsy Nosoratana Mihitsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 11:11 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra amglisy nivoaka tamin'ny 26 Aprily 2006)
Manoratra mikasika ny zavatra niainany tamin'ny naha miaramila noterena hanompo tany Chernobyl 20 taona lasa izay ny mpampiasa LJ wall4 – avy any Lviv, Okraina, izay ankehitriny monina ao Connecticut. Arahina sary marobe miloko fotsy sy mainty an'ny tafika ilay tantara.
20 Taona lasa izay. Ireo taratasy tsy nosoratako mihitsy.
”Ry Mama, Tsy ho adinoko mandrakizay ny fomba nihazakazahanao nivezivezy teo alohan'nireo varavarana nihidy an'ilay foibe fandraisana ho miaramila. Aza tezitra fa handeha tsara daholo ny zava-drehetra, tsy hijanona ela any aho.”
”Ety ambony fiarandalamby izahay, vetivety dia lasa mpinamana avokoa ny rehetra. Samy mamo tampona, tsy manakana anay ireo manamboninahitra, takatr'izy ireo… […]
‘Foana i Kiev, 6 Maraina, kamiaon-drano fotsiny no tsy tapaka manondraka rano ny làlana. Tao amin'ny toerana fisavana ao Avaratry ny tanàna, mifinakalo kamiao sy fiara fitateram-bahoaka amin'ireo mpitsoa-ponenana izahay. Avy any izy ireo. Handeha ho any kosa izahay. Mangorintsina avokoa ny rehetra – avy any amin'ny hatsikan'ny maraina vao miposaka sy faminaniana amin-tahotra ny zavatra ho avy. Efa ela ny rehetra no afaka hamamoana.”
“Tonga izahay, ditrikan'i Polesskiy, tobinà tranolay ankalamanjàna. Andro izay mafana mahafinaritra. Mijoro daholo izahay rehetra, matahotra ny hipetraka amin'ilay bozaka noho ny resaka taratra. Indro ny iray tsy nahavita niaritra ka nipetraka. Nandeha tsirairay nanaraka azy nony avy eo. Folo minitra taorian'izay, nitorevaka teo ambonin'ilay bozaka daholo ny rehetra, nitanina andro – ary tsy nampahatahotra velively satria tsy hita maso ny taratra”
”Aty amin'ny faritra tsy azo aleha izahay. Mitety manao fiambenana tanàna iray, miaro azy amin'ireo mpandroba. Tampoka teo, misy mikofokofoka any anaty bozaka. […] Mivoaka avy ao ny ramatoa antitra be iray: ”Anaka, mba ampidiro ao an-trano aho ary haka bodofotsy sy vilany. Noroahan-dry zareo izahay, tsy namela anay naka na inona na inona ry zareo…” Mampitodika ny masonay izahay, feno ranomason-kenatra sy alahelo ao anatiny…”
”Goavana be ireo olatra ary feno betsaka amin'izy ireny aty. Alain'ireo mponina manerana ny lalana mamaky ala izy ireny. Misitrika eny anelanelan'ireo fefy ry zareo, miditra ao amin'ny Faritra ary maka olatra. Hoy izahay amin-dry zareo: ”Inona rey olona ireto ataonareo. Ho voapoizin'io ianareo!”- ary mihomehy kely izy ireo ho valiny, miaraka amin'ny hafetsen'ny tantsaha:” Tsy hisy na inona na inona hanjo anay, jereo anie ny hatsaran'ireo olatra eh …”
”Ry neny, saika tratran'ny oran henjana be izahay androany. Mandeha eny amin'ny sisin-dalana i Sasha Tatarchuk sy ny tenako, ary tampoka teo, maneho feo mafy be. Mitraka izahay, mitoditodika manodidina – misy angidimby eo ambonin'ny lohanay, manondraka ny lalana amin'ny fangarona ioda sy lysol, mba hiadiana amin'ny vovoka radiôaktifa. Tena zara raha afaka nihazakazaka ivelan'ny làlana izahay, efa voafafin'ity tay maimbo be ity kely ihany.”
”Tompondakan'ny Baolina Kitra any Meksika. Mampiditra baolina amin'ny tanany i Maradona. […] USSR-Hongria 6:0. Mijery izany daholo izahay ao an-tanànan'i Osipovichi, Narovlyanskiy distrikan'ny faritra Gomel, ao amin'ny sekolin'ny tanàna. Ireto no teny eo amin'ny solaitrabe (28 krasavika 1986 goda” [28 Aprily 1986 – BEL]. Midika izany fa 12km miala an'i Pripyat, mbola nianatra ny ankizy roa andro taorian'ilay loza nitranga.”
”Ry Mama, nahita ilay Ala Mena aho ary ny toby famokarana herinaratra ery lavitra ery. Ary ny masoandro mody mavomavo eo amboniny. Tena tsara be aty – ala, farihy ary fahanginana… Any amin'ireo tanàna, tonga eny amin'ireo toerana fanarahanay maso ny alika sy ny saka ary mihinana serealy miaraka amin'ny saosy am-bifotsy, avy aminà lovia iray ihany. Indrindray, tsy vitan-dry zareo ny mizara izany ary mivovoa amin'ilay saka ilay alika, dia maninjitra ny volombavany ka mamaly amin'ny sioka ilay saka. Matetika mivoaka ho moandresy ny saka (toy ny amin'ny fiainana andavanandro). Mihazakazaka manerana ny saha sy zaridaina feno ahitra manana haavo 1 metatra ireo soavaly, manao andiany ary mamela erotra. Indrindray, misy fitaterana voaaro vy mandalo haingana be.”
”Ry Neny, mahazo ranom-boaloboka Soedoà anaty boaty feno pipety sy sôkôla ireo miaramila. Mitondra fitovana kely misy entona fitroka sy akanjo fiarovana vita amin'ny fingotra izy ireo. Tovolahy 19 taona. Eo akaikin'izy ireo, tsaroako ho toy ny efa mpiady hendry, manana traikefa ary mahery fo aho. Efa 22 sahady aho izao.”
”Tafody an-trano ihany nony farany. Mandalo amin'ny faritra ivelan'ny tanàna ny fiarandalamby, manakaiky ny gara. Voaterin'ny varavarankely, ny takolaka, sy ny orona mipetaka amin'ireo varavarankely. Trano.”
Ho an'ireo namako Sasha Tatarchuk, Pavlik Fedorich, Vova Gamazin, Vitya Mostovets, Lyokha, Aristarkhushka, Ivan-Shayba, Zaliznyak. Tandremo tsara ny fahasalamana. Avelao hitombo ara-pahasalamana tsara ny zanakareo, tena zava-dehibe ho antsika rehetra izany…